Rehefa mametraka ny rindrankajy eo amin'ny solosaina, ary rehefa mihazakazaka izany voalohany, ianao dia hahazo bitsika mba hampavitrika ny rindrambaiko. taorian'ny fametrahana, dia homena ny rohy mankany amin'ny fampahavitrihana pejy. Mba miangavy re, araho ilay rohy ary fenoy amin'ny endrika, ao anatin'izany ny fidirana ny laharana nomerao hita ao amin'ny fampidirana tolotra hampiasa ny famandrihana maimaim-poana ny lozisialy RescuePRO®. Tsindrio eto ho dingana-by-dingana mpitarika ny fampahavitrihana
aza hadino fa, raha vao haingana ianao no nividy fiara SanDisk USB, ary ny tapakila miaraka fa USB fiara ho RescuePRO manana serial isa izay manomboka amin'ny RPRID-0501, Mba miangavy re tsindrio eto noho ny alaina ny RescuePRO Deluxe.
aza hadino fa, raha ny solosaina ianao dia tsy fametrahana tamin'ny mifandray amin'ny aterineto, dia azonao atao ny mandefa mailaka ny laharana fangatahana ho an'ny RescuePRO® Support, ary afaka manome anao ny Activation Code.